IMelika ingaphelelwa izinguzunga zeqhwa ngasekupheleni kwekhulu leminyaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngenkathi umongameli waseMelika, uDonald Trump, engabaza ukufudumala komhlaba, izinguzunga zeqhwa ezweni lakhe ziyancibilika. Ezinguzungeni zeqhwa eziyi-150 ezazikhona eGlacier Park yaseMontana ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX, namuhla bangu-26 kuphela abalahlekelwe ama-85% weqhwa labo engxenyeni edlule yekhulu leminyaka.
Ukunyamalala kwakhe sekuseduze, kangangoba singaletha lezi zindaba ezibuhlungu eminyakeni embalwa nje.
Ukufunda izinguzunga zeqhwa kubaluleke kakhulu, ngoba ama-barometers azinzile wezinguquko zesikhathi eside eMhlabeni njengoba zingasabeli kumikhuba yesimo sezulu yonyaka. Mayelana nalokhu, umcwaningi we-United States Geological Survey (USGS) uDaniel Fagre, uthe "uyazi ukuthi kunenkambiso yesikhathi eside lapho zonke izinguzunga zeqhwa zincibilika noma zikhula ngasikhathi sinye."
IGlacier Park engamakhilomitha-skwele angu-4100 ifaka izinguzunga zeqhwa ezisukela eminyakeni engaphezu kwengu-12.000 XNUMX edlule. Izinguzunga zeqhwa lokho Ziyanyamalala ngenxa yokwanda kwamazinga okushisa emhlabeni kanye nokwanda kwesilinganiso semvula yamanzi phambi kweqhwa epaki.
Ngokusho kwezazi zokwakheka komhlaba, I-United States kungenzeka ilahlekelwe yizo zonke izinguzunga zeqhwa zayo ngasekupheleni kwekhulu leminyaka, kusale labo abase-Alaska kuphela, abangaphezulu kokufana kwama-48. Khonamanjalo, uMengameli uTrump ubukeka engazinaki izixwayiso zososayensi, abahlela ukuhoxa Esivumelwaneni Sezulu saseParis mayelana nokuguquka kwesimo sezulu.
Umongameli ukholelwa ukuthi imithethonqubo yezemvelo iyabhuleka ekuthuthukisweni komnotho, ngakho-ke useqalile ukubuyekeza izindlela zokulawula ukungcola ezivunywe nguBarack Obama, owathembisa ukwehlisa ukungcola phakathi kuka-26 no-28% maqondana emazingeni we-2005.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » IMelika ingaphelelwa izinguzunga zeqhwa ngasekupheleni kwekhulu leminyaka